Paikady YouTube izay manan-danja amin'ny fahombiazan'ny fantsonao - YTpals
Paikady YouTube izay tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fantsonao
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2005, nanjary fitaovana be mpampiasa indrindra amin'ny fandefasana horonan-tsary amin'ny Internet ny YouTube. Hatramin'ny taona 2020 dia misy manodidina Olona 2.1 miliara maneran-tany mampiasa YouTube. Ny natomboka ho fitehirizana an-tserasera ho an'ny horonan-tsary am-pitiavana dia lasa sehatra afaka manolotra ny fitomboan'ny olona amin'ny fomba tsara indrindra. Raha vonona ny hanao ny ezaka ilaina ianao ary hampiasa paikady tsara, dia hahazo fampirantiana lehibe eo amin'ny lampihazo koa ianao. Ity lahatsoratra ity dia hijery toro-hevitra lehibe sy paikady YouTube izay hametraka ny fantsonao amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana.
1. Mamorona votoaty mitongilana
Ny hevi-diso mahazatra momba ny fahazoana fahombiazana amin'ny YouTube dia ny famoronana votoaty viraliny no hany fomba. Niova ny fomba fanjifan'ny mpampiasa horonan-tsary tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary tsy ny paikady tsara indrindra amin'ny YouTube foana ny fomba famoronana horonan-tsary viraliny. Na dia jerena amin'ny finday aza ny ankamaroan'ny votoaty dia tsy voatery midika izany fa ny olona mitady horonan-tsary fohy ho an'ny fialamboly fotsiny. Satria tsy voatery mitady fialamboly ny olona eny an-dalana, dia mihamitombo ny velaran'ny votoaty mitongilana. Ny votoaty mitongilana dia manondro horonan-tsary lava kokoa izay mety hampiala voly, hanabeazana, ary ahalalana.
Raha tianao hahomby ny fantsonao, ny ampahany manan-danja amin'ny paikadin'ny YouTube anao dia tokony ho tsy miovaova. tapaka dia ampahany lehibe amin'ny fampitomboana ny isa video amin'ny algorithm YouTube. Hanampy izany raha miezaka tsy miovaova amin'ny fandefasana horonan-tsary ianao ary miantoka fa mivoaka miaraka amin'ny horonan-tsary vaovao ianao isaky ny roa andro. Izany dia manampy amin'ny fijanonana ho manan-danja eo amin'ny lampihazo. Tokony hiantoka ihany koa ny tsy fitoviana amin'ny lafin'ny endrika. Azo atao izany amin'ny fampidirana lohahevitra miverimberina na fampiasana olona na tarehin-tsoratra mitovy. Ho fantatry ny mpijery anao izay andrasana amin'ny fantsonao amin'ny fampiasana an'io paikady io. Rehefa mandeha ny fotoana dia hiova ho tsy fivadihana ny mahazatra.
3. Ampirisiho ny mpihaino anao hanao zavatra
Na iza na iza manana fantsona YouTube dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny famporisihana ny mpijery anao handefa fanehoan-kevitra sy hitia ireo horonan-tsary. Ny paikadinao YouTube dia tokony ho kendrena amin'ny fananganana mpihaino ifanakalozan-kevitra fa tsy mpihaino tsy miraharaha. Fomba iray hafa hamporisihana ny mpijery anao handray andraikitra dia amin'ny alalan'ny karatra YouTube. Ny karatra YouTube dia tonga amin'ny endrika fampandrenesana efa nomanina mialoha izay afaka manondro ny mpijery amin'ny horonan-tsary hafa ao amin'ny fantsonao na ny tranokalanao. Ankoatra izany, ny efijery farany dia azo ampiasaina amin'ny fampiroboroboana votoaty hafa.
4. Amboary ny votoatinao amin'ny fikarohana YouTube
Mba hiantohana ny fahombiazan'ny YouTube amin'ny fantsonao dia tokony ho azonao antoka fa ny fantsonao dia mahazo fampirantiana ambony indrindra. Na dia hametraka anao amin'ny lalana marina aza ny kalitaon'ny atiny sy ny tsy fitoviana, dia ilaina ny manatsara ny atiny mba hampitomboana ny laharany Fikarohana YouTube. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana teny fanalahidy amin'ny lohateny, ankoatry ny famoronana famaritana tsara sy fampidirana marika mifandraika.
5. Eritrereto ny fotoana bitika ataon'ny mpijery
Ny tian'ny mpijery dia tokony ho eo aloha sy afovoany rehefa mamolavola paikady YouTube. Raha te hanatitra votoaty mifandraika amin'ny mpijery ianao dia mila mandinika ny fotoana bitika ataon'ny mpijery rehefa mitady votoaty. Tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny antony manery ny olona hikaroka lohahevitra manokana amin'ny lampihazo. Azonao atao ny manakana ity dingana ity ary manolotra ny filan'ny mpijery amin'ny famoronana ny atiny tadiaviny.
Ny tanjona faratampony amin'ny paikadinao YouTube dia tokony hanangana vondron'olona mpijery mahatoky eo amin'ny lampihazo. Miaraka amin'ireo toro-hevitra ireo dia azonao atao ny mametraka ny fantsona YouTube anao amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana. Azonao atao ny manampy ireo paikady YouTube ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana sarobidy hafa misy ao YTpals. Ianao dia afaka mividy Ora YouTube Watch, izay afaka manampy amin'ny fanombohana ny fantsonao sy manatsara ny laharan-karokao amin'ny Google sy YouTube. YTpals dia manolotra karazana serivisy YouTube premium izay manampy amin'ny fitomboan'ny fantsona YouTube. Izahay dia miantoka ny fahafaham-po tanteraka amin'ny mpanjifanay amin'ny fanomezana fa ny fanaterana dia mihoatra lavitra noho izay voabaiko. Ny serivisy YTpals dia tonga miaraka amin'ny antoka 100% momba ny fiainana manokana sy ny fiarovana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisinay dia mifandraisa aminay anio!
Paikady YouTube izay tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fantsonao avy amin'i YTpals Writers, 7 Janoary 2022
Fomba 4 hanovana ny fomba fijerin'ny YouTube ho famandrihana - Ny bokinay
Ara-dalàna ny mankafy fijerena an'arivony amin'ny horonantsary YouTube anao nefa miaina kely na tsy miakatra ny isan'ny mpanjifa. Ny olona sasany mety ho eo akaiky hijery izany horonantsary manokana izany, ny sasany kosa mety…